Wararkii ugu dambeeyay ee Ganacsiga Caalamka - Alietc.com
Madaxbanaanida Shiinaha ee tikniyoolajiyadda qorshaheeda horumarineed waxay muujineysaa ujeedkeeda: inay ku ballaariso aagagga tiknoolajiyada xuduudaha. Ka dib markii uu ku guuleystey teknoolojiyadda shirkadda Huawei iyo Tencent Holdings ee gudaha, Shenzhen waxay tusaale u noqotay magaalooyinka sida Xi'an. Xi'an, waa magaalo weyn oo sii kordheysa sanadka 2020, waxay qaaday talaabooyin adag oo lagu horumarinayo guulaha semiconductor […]Read More
Saamiyada Xiaomi waxay arkeen boodboodi 25-kii Maarso iyada oo qaadiga Mareykanka uu si kumeel gaar ah u qaaday xayiraadihii uu saaray madaxweynihii hore Donald Trump. Xaakimka degmada Mareykanka Rudolph Contreras ayaa qaaday cunaqabateyntii uu saaray maamulka Trump. Wuxuu sheegay in shirkadda Shiinaha la garaacayo haddii gargaar laga tago. Ma jiraan wax caddeyn ah oo xaqiijinaya Xiaomi […]Read More
Waxaa burburiyey aafada, Virgin Atlantic Airways waxay qorsheyneysaa inay uruuriso million 160 milyan, sida uu sheegay afhayeen u hadlay shirkadda diyaaradaha ee Richard Branson. Marin-haweedka ayaa sii xoojinaya xaaladdiisa maaliyadeed, ayay tidhi, iyada oo ku dartay maalgelinta ugu dambaysay (million 160 milyan) waa taageero fiican sanadka 2021 maaddaama soo kabashada ay wali gaabis tahay. Iib-iibinta laba Boeing 787s bishii […]Read More
Ku qabso Wadahadallada SPACs
Shirkadda 'Grab ride-hailing' waxay kala xaajooneysaa shirkad ujeeddo gaar ah la leh Mareykanka (SPAC) inay dadweynaha u soo bandhigaan. Heshiiska midowga waxaa lagu qiimeeyaa inta udhaxeysa $ 35 billion ilaa $ 40 billion, macaamilkii ugu weynaa abid. Grab Holdings Inc ayaa kala hadlay Altimeter Capital Management, oo taageerta laba SPACs. Marka la eego, warbixin cusub ayaa lagu sheegay in Grab uu gorgortamayo […]Read More
Hindiya ayaa Bilowday Soosaarka Cagaaran ee Hydrogen
Hindisaha hydrogen cagaaran ee Hindiya waxaa isku raacay Fusion Fuel Green iyo BGR Energy Systems. Waxay ka dhisi doonaan tas-hiilaadka la xiriira Tamil Nadu, oo ah koonfurta gobolka Hindiya, sanadkan. Ujeeddadu waa in la ballaariyo qorshaha hydrogen cagaaran ee dalka. Fusion Fuel Green, oo xafiisyo ku leh Boortaqiiska iyo Irland, ayaa siin doona warshaddii Tamil Nadu […]Read More
Shirkadda Bartilmaameedka ayaa beegsaneysa nooc cusub dhowaan. Waxaa loogu magac daray Maalinta ugu Jeceshahay, khadka cuntada iyo cabitaanka ayaa bixin doona waxyaabo kala duwan oo fudud, in ka badan 700 oo cunto iyo agabyo cabitaan ah. Waxay u dhaxeeyaan jalaatada ilaa rootiyada, keega, cabitaanka iyo waxyaabo kaloo badan. Shirkadda tafaariiqda ee Mareykanka ayaa isku dayaysa inay soo jiidato macaamiisha […]Read More
Shaqaalaha Haweenka ee Jabbaan ayaa garaacay Mareykanka iyo Yurub
Haweenka haweenka ah ee Japan ayaa kordhay, waxayna ka sare mareen Yurub iyo Mareykanka boqolkiiba, sida ay sheegtay Kathy Matsui, gudoomiye kuxigeenkii hore iyo madaxa istiraatiijiyadda Japan ee bangiga maalgashiga caalamiga Goldman Sachs. "Womenomics", waa eray ay iyadu abuurtay, waxaa soo dhoweeyay Shinzo Abe, Raiisel wasaarihii hore ee caanka ahaa, kaasoo qaaday talaabooyin haweenka loogu ogolaanayo inay qaataan […]Read More
Kooxda Maleysia ee AirAsia Si ay u Daahfuraan Bixinta Diyaarada
In kasta oo shirkadda duulimaadka raqiiska ah ay eegayso ballaarinta waqtiga masiibada, shirkadda Malaysia ee AirAsia Group Bhd waxay higsaneysaa inay soo bandhigto taksikeeda hawada iyo adeegga ugu horreeya ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Qorshaheeda kale ayaa ah inay bilawdo wershadaha soo dhoweeya bisha Abriil si ay u fududeeyaan safarada. Tony Fernandes, oo ah agaasimaha guud ee kooxda ayaa sheegay in tagaasida hawada oo ay la socdaan duuliye ay waddo […]Read More